Nke a bụ ajụjụ na ọtụtụ mmadụ ga-achọ inweta azịza. Ọ bụrụ na ị nwere Smartphone, ị maara otú na-atọ ụtọ bụ na ọ ịmafe site na otu ringtone ọzọ na-ege ntị ọkacha mmasị gị-awụ ọsọ n'ugwu. Ebee ka ị na-enweta nke a ụdaolu si? Smartphones abịa na ụfọdụ random ụdaolu, ma ị ga-ahụ ndepụta bụghị inwe ọkacha mmasị gị ụdaolu. Mgbe ị na-aghọta na gị smartphone adịghị nwere ọkacha mmasị gị ụdaolu, ị na-adịghị mkpa tụfuo. Ị nwere ike ka na-eme ụdaolu si YouTube ma nyefee ha ka ha na ekwentị gị. Ma ọzọ ị ga-aghọta usoro a abụghị mfe dị ka unu na ike echiche karịsịa mgbe ebufe ha ka ha na-iPhone. Anyị ga-agwa gị otú ime nke a n'isiokwu a.
Usoro 1: Download YouTube MP3 na-eme ka ụdaolu na iTunes
Usoro 2: Record YouTube music na-eme ka ụdaolu
Method 3: Site online ringtone onye saịtị
Wondershare AllMyTube-Enye nwere ike inyere gị download YouTube mp3 faịlụ ozugbo wee mee ka ụdaolu. Usoro bụ dịkarịa ala onwe-nkọwa, ma m anakọtara ụfọdụ nzọụkwụ site nzọụkwụ ntụziaka na screenshots-enyere gị aka malitere. Usoro a na-achọ akụkụ abụọ, akụkụ mbụ na-achọ onye ibudata YouTube mp3 na akụkụ nke abụọ na-achọ onye na-eme ka ụdaolu iji iTunes.
Nzọụkwụ 1 Wụnye AllMyTube
Download Wondershare AllMyTube si n'okpuru. Download a YouTube video Downloader melite site na saịtị. Mgbe nbudata melite anabata usoro na wụnye ya n'ime kọmputa gị. Mgbe echichi zuru ezu ẹkedori AllMyTube omume
Nzọụkwụ 2 Download YouTube MP3 faịlụ
E nwere ụzọ abụọ ibudata vidiyo site na iji a usoro. Ị pụrụ iṅomi gị YouTube video URL wee pịa 'Tapawa URL' bọtịnụ na họrọ YouTube MP3 si nhọrọ. The abụọ nhọrọ bụ pịa '' download 'button nso video ebe ma họrọ naanị Audio.
Nzọụkwụ 3 Bee song na iTunes.
Ẹkedori iTunes omume na kọmputa gị. Ịgbakwunye YouTube song na ị ebudatara n'ime iTunes music Library. Họrọ song si Ọbá akwụkwọ na nri pịa ya. A n'akụkụ window ga-egosipụta. Pịgharịa gaa na ala nhọrọ na họrọ "Get Info" nhọrọ.
Ọzọ window ga po elu na pịa na 'nhọrọ' pịa. Gaa na "Kwụsị Time" igbe na-abanye na gị họọrọ oge na-emekarị na-erughị 30 sekọnd
Nzọụkwụ 4 Mee ihe AAC Version.
Na YouTube song na ị họrọ, nri pịa ya ọzọ. Gaa na "Mepụta AAC Version." Nhọrọ ma họrọ a nhọrọ. The version nke song ga ugbu a na-egosipụta. Ịlaghachi azụ n'ime mbụ version nke YouTube song họrọ na pịa na otu nhọrọ aha ya bụ "Get Info". Na-aga n'ihu na ihichapụ oge na ị banyere ke nkwụsị oge.
Nzọụkwụ 5 ịgbanwe faịlụ ndọtị ka m4r.
Ọ bụrụ na ị na-eji Mac, gaa na obere version nke song nri pịa ya. Wee họrọ nhọrọ aha ya bụ "Gosi na Finder." Gaa faịlụ ndọtị, pịa ma overtype na ya. Jide n'aka na-agụ M4A agbanweela m4r. Na-azụ ndị iTunes n'ụlọ ngalaba site abụọ na ịpị song. Gaa slide asaa.
N'ihi na ndị na-eji Windows sistemụ, usoro bụ a bit mgbagwoju anya. Gaa windows-amalite nhọrọ, mgbe ahụ ka akara panel. Họrọ na-ele akara panel oyiyi site na-ahọpụta "Large oyiyi" enịm ke nri akuku. Gaa na "nchekwa Nhọrọ" na pịa ya. Pịa na "View" taabụ na ala nke egosipụta window na pịa ka uncheck '' Zoo extensions maka mara ụdị faịlụ "nhọrọ wee pịa" OK. "
Iji gaa obere version nke song na nri pịa ya. Right pịa song ma họrọ "Gosi na Windows Explorer".
The song ga-emeghe na Windows Explorer. Gaa aha nke họrọ YouTube song na otu click na ya. Gbanwee faịlụ ndọtị nke song na .m4r usoro. Ọ bụrụ na ị abụọ pịa na song ị họrọ, ọ ga-reopen na iTunes.
-Aga azụ ka iTunes n'ụlọ ngalaba, pịa na dobe ala ndị ikom gị iTunes music n'ọbá akwụkwọ. Họrọ nhọrọ kpọrọ "-aj u." Site ndepụta nke egosipụta song, ị ga-ahụ ugbu a gị ringtone.
Nke abụọ usoro bụ idekọ YouTube music na-eme ka ụdaolu na iTunes. Usoro ihe omume na ị chọrọ bụ Wondershare Streaming Audio Recorder.
Nzọụkwụ 1 Download Streaming Audio Recorder
Download a ndutịm n'okpuru. Ozugbo ị ebudatara Wondershare gụgharia AudioRecorder ntọlite, biko okpukpu abụọ pịa ya iji wụnye ozugbo.
Nzọụkwụ 2 Record YouTube Music
Mgbe wụnye usoro ihe omume, pịa na "Record" bọtịnụ. On top n'akụkụ aka nri nke usoro ihe omume, ị ga-ahụ ihe audio ụdịdị dị iche iche eserese. Ị ga-ejikọrịrị a anụ internet iji maka nke a YouTube music edekọ ka ịmalite ndekọ egwu gị. Ị ga-enwe ohere audio / video gụgharia nkwụnye na na ngwaọrụ. Nchọgharị weebụ gị ga-emeghe. See ndekọ bọtịnụ mgbe ọkacha mmasị gị music amalite enuba na programmụ a ga na-akpaghị aka na-amalite idekọ gị song egwu na ị tube.
Ị ka pụrụ iji ndị ọzọ taps na ihe nchọgharị gị ma ọ bụ mee ihe ọ bụla ọzọ na oru ngo na kọmputa gị. Ozugbo ị bụ site na Ndekọ gị YouTube gụgharia song, pịa Kwụsị button hụrụ na ime akara wijetị. Nke a wijetị bụ na n'akụkụ aka nri nke usoro ihe omume ihuenyo. A ozi ga-apụta na-egosi na ndekọ e dechara nke ọma.
Nzọụkwụ 3 Mee ụdaolu na Wondershare SAR
Ka ịmepụta a ringtone nke dere song, gaa na mgbịrịgba icon bụ nke dị nso na-ese aha na pịa ya. Ozugbo ịpị mgbịrịgba icon, a bitmap nke track ga-egosipụta. Si ebe a ị nwere ike mfe họrọ song na ewepụtụ ngalaba na ị na-achọghị. Site na-eme, na i kere a ringtone ala.
Nke atọ usoro nke na-eke ụdaolu si YouTube na-eji ihe online ringtone onye na saịtị. Ndị kasị mma online na m na-ejikarị eji bụ Brinked.com. Nke a na saịtị awade irè web enyi na enyi na ngwa na-nwere ike tọghata ọ bụla ọdịyo faịlụ n'ime a ringtone. Ị nwere ike tọghata ọ bụla MP3 songs na ị download si YouTube n'ime a ringtone n'ihi na gị iPhone. M kwuru nke a na saịtị bụ irè ebe ọ nwere ike weghara gụgharia audio ọ bụla na nchọgharị na ka ọ ghọọ ringtone. Saịtị bụ a free na saịtị na ị ga-ahụ usoro nnọọ mfe ịghọta na-eso.
Nzọụkwụ 1: Iji na-eji nke a ngwa weebụ na Brinked.com, ị mkpa aha ha site edebanye na saịtị. Mgbe eke akaụntụ gị na saịtị a wee soro ụkpụrụ nduzi n'okpuru ike gị ụdaolu si YouTube.
Nzọụkwụ 2: Gaa gụgharia YouTube video na ị chọrọ ghọọ a ringtone. Detuo URL nke a YouTube video na ihe nchọgharị gị na mado ya na button kpọrọ "Mepụta site YouTube URL."
Nzọụkwụ 3: Immeduiately mgbe pasting URL, na weebụ na ngwa ma saịtị a ga-amalite iji mara na faịlụ dị ka e gosiri na web image belew.
Nzọụkwụ 4: Mgbe loading zuru ezu, ị ga-ahụ ihe audio ụdịdị dị iche iche eserese. Họrọ akụkụ nke YouTube song na ị chọrọ ka ọ gaa ringtone. Ị nwere ike ma họrọ ịbanye nọmba ma ọ bụ jiri òké na ịdọrọ na họrọ akụkụ na ị chọrọ.
Nzọụkwụ 5: Mgbe ahọpụta na akụkụ na ị chọrọ iji tọghata a ringtone, jide n'aka na-aha ya.
Nzọụkwụ 6: Mgbe akpọ gị faịlụ click esote mezue usoro. Gị ringtone ga-kere. Oge na nke a usoro na-ewe dịgasị dabere ụdị nke internet ị na-eji. Ọ bụrụ na ị na-eji superspeed internet, usoro ga-sekọnd ole na ole iji wuchaa. Ọ na-atụ aro ghara pịa na opton na-ekwu "Zitere ekwentị." Ọ bụrụ na ị pịa a button, ị ga-ụfọdụ na saịtị na-ere ụdaolu.
Nzọụkwụ 7: Mgbe eke gị ringtone eji weebụ ngwa n'elu, ọ bụ ugbu a oge ibudata ringtone nke ọdịyo format na ị na-ahọrọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji ụdaolu na iPhone, download faịlụ n'ime M4R format ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji ya na ihe Android ekwentị, tọghata faịlụ n'ime MP3. Ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee faịlụ n'ime ekwentị gị, mkpa ka i soro kpọmkwem ụkpụrụ nduzi. M nwere ihe dị Android ekwentị. Ya mere usoro nke na-ebufe converted faịlụ iji ya na ekwentị m dị nnọọ mfe ma quicker. Ọ bụrụ na ị na-eji ihe iPhone, ihe ị chọrọ ime na-ringtone n'ime ekwentị gị bụ ịdọrọ M4R faịlụ na ị ebudatara na na Library ngalaba nke iTunes. Nzọụkwụ ọzọ bụ nyefee ringtone si iTunes gị iPhone.
> Resource> YouTube> Olee otú Mee Ringtones si YouTube